Miwani Polarkusimuka Polar Wood Nhema 24 025 05 - Magirazi ezuva evarume - Magirazi emadzimai evakadzi - THE INDIAN FACE
Polar Wood / Nhema
Miwani The Indian Face® dzinozivikanwa uye dzinotengeswa munyika dzinopfuura makumi matatu. Iwe unofunga kuti kukuvara here? #VABEREKWA
Unisex chimiro kune vese varume nevakadzi
TAC lenzi PolarTsanangudzo Yakakwirira inosimudza
CAT.3 kudzivirirwa - UV400
Yakawedzera yakasimba titanium hinges
Iwo akazara eunisex magirazi, ndiko kuti, iwo magirazi ane mafuremu anoenderana kune vese varume nevakadzi. Kutenda kuhuremu hwayo hwakaenzana, isu tinowana yakanaka maitiro ekuona kune ese maviri maficha profiles, nokudaro tichiwana huwandu hwakawanda.
Aya magirazi ezuva akagadzirwa nemalensi polarHoists inokwanisa kuvhara zvakajeka zuva rakapenya uyezve kupenya uye kuratidzira kunogadzirwa nekuburitsa kwavo nzvimbo dzakatsetseka senzira yemugwagwa, mvura yegungwa, nezvimwe. Nekudaro kuzadzikisa kuona kwakapfava uye kwakanyanya kugadzikana pamwe nekugadzira zvakare rakasarudzika ruvara uye musiyano.
Vane dziviriro UV400 muchikamu chechitatu, ichiita sarudzo yakasarudzika yekudzidzira mvura uye mitambo yechando, pamwe nekuve wakanakira kushandiswa kwezuva nezuva uye yakakodzera kutyaira
Magirazi emeso PolarKusimudzwa: vanodzora maratidziro uye kuwedzera kwemwaranzi yezuva panzvimbo dzakadai semugwagwa kana gungwa, nokudaro kugadzira kujeka kwakanyanya kunoonekera kunoshandura mukunyaradza kukuru kwemaziso ako.
firita UV400 inokudzivirira kubva kumwaranzi yezuva yeUV, kusanganisira UVA uye UVB mwaranzi.
Kupenya kwechiedza muChikamu 3 kwakakwana kwemazuva ane zuva rakanyanya. Kuti uende kumahombekombe, dzidzira mitambo kana kungofamba-famba mumaruwa kana guta.
TAC lenzi inogadzirwa neHigh Definition yakawanda-yakaturikidzana kuti ibudirire kupinza kwakakura mune chero mwenje mamiriro Iwe uchaona ese mavara aine musiyano uri nani uye kuvimbika kukuru.
Ultra mwenje furemu yakagadzirwa nePC
Yakawedzera yakagadzikana unisex ergonomic dhizaini yekukwana zvirinani kune vese varume nevakadzi
5-bar titanium hinges yekusimba kwakakura pakuita kwakanyanya. Magirazi egirazi anogona kuvhurwa nekuvharwa zviuru nezviuru, saka zvakakosha kuti uve nemahinji epamusoro emhando yepamusoro anokwanisa kumira nekufamba kwenguva.
Yedu magirazi egirazi modhi Polar, ine akasiyana mavara uye musanganiswa mukati mayo muunganidzwa.
Yakawedzera kugadzikana dhizaini yekuenderana nezuva rako zuva nezuva, zvese mumitambo uye uchifamba nemumaruwa kana guta.
The Indian Face® chiratidzo chinotengeswa munyika dzinopfuura makumi matatu muEurope, America, Asia, Africa neOceania.
Magirazi ezuva evanhu vane mweya wekumhanya uye wakasununguka vanotyora mitemo. Aya magirazi ezuva polardzakasimudzwa dzakakosha unisex kune vese varume nevakadzi. Inowanikwa mune akasiyana mavara musanganiswa kuti akwane mararamiro ako.
Magirazi egirazi anogona kuve akanakisa ekushandisa iwe. Kwete chete iyo inokudzivirira kubva kuzuva asi zvakare inobatsira iwe kutsanangura yako yakasarudzika kana yemitambo kutaridzika. Munguva yakapfuura, varume vaive nezvisungo zvakasiyana siyana muwadhiropu nemadzimai, heti dzinoverengeka dzekubatanidza maratidziro avo ezuva nezuva. Kusvikira nhasi, magirazi ezuva ndiwo akasimba akasimba anoiswa mumunhu kana apedza kutaridzika kwavo, vese varume nevakadzi. Ivo vanokupa iwe ruvara, dhizaini, chimiro uye zvakare kudzivirira kwezuva
Iwe unogona here kukumbira chimwe chinhuzve kubva kumubatsiri?
Iwo magirazi ezuva evarume kana vakadzi?
Iwo akazara eunisex magirazi, ndiko kuti, ivo vanopfekedzwa nevakadzi nevakadzi. Vanonzwa vakanaka mune zvese zviitiko. Iwo magirazi emitambo echimiro emitambo anofarirwa nemurume nemukadzi, izvo zvavanokupa iwe ipfungwa yemitambo iri mufashoni. Magirazi emitambo emitambo yevanhu vane mweya wemitambo.
Ndeapi magirazi ezuva polarkusimuka?
Iwo magirazi ane lenzi ari polarakasimudzwa. Iye polarKusimudzwa firita vertical iyo inovhara mwaranzi yechiedza kubva kuzuva inosvika kumeso edu yakatwasuka, semuenzaniso, apo mwaranzi yezuva inoratidzwa muchando, mumvura yegungwa kana muasphalt. Ita kuti kunakidzwa kunakidze.
Chii chiri nani, magirazi ezuva polaryakasimudzwa kana yakajairwa?
Izvi zvinoenderana nemunhu wega wega. Kazhinji kupfeka gafas de sol polarkusimuka Izvo zvinonyanya kusununguka kumeso, asi semuenzaniso, kune emagetsi zvigadzirwa zvigadzirwa izvo zvisingaonekwe zvakanaka nelenzi polarakasimudzwa. Kana tichifambisa kana kufamba mugungwa, tinokurudzira zvakasimba kupfeka magirazi ezuva ane lenzi polarKusimudzwa kubvira nekubvisa kuratidzika kubva kune asphalt kana gungwa, ivo vanobvumidza kutyaira kwakanaka uye kufamba.
Ndeapi lenzi Mapato?
CATEGORY 0-1 Iwo akasarudzika mafashoni egirazi, nawo haufanire kuzviisa pachena zvakanyanya kuzuva.
CATEGORY 2 Inowedzera iyo nhanho yekudzivirira, asi zvakadaro haina kukodzera kuti ishandiswe neakawanda ekuratidzwa kwezuva.
CATEGORY 3 Inofungidzirwa kuchengetedzwa kwakaringana kwezviitiko zvakajairika pasi pezuva rakasimba.
CHIKAMU 4 Chikamu chepamusoro chekudzivirira, chinokodzera chete zviitiko izvo maziso anoratidzwa kune akanyanya mwenje mwenje senge kutsvedza kana kukwira makomo. Vanorambidzwa kutyaira.
Nzira yekuziva sei kana magirazi ezuva ari polarkusimuka?
Iwe unofanirwa kutanga waisa magirazi ezuva munzvimbo yakatwasuka wobva waadzora zvishoma nezvishoma verticalpfungwa kusvikira wasvika 60- kusvika 90º. Kana girazi rikashanduka kuva rakasviba zvishoma kupfuura zvaraive rakaita, saka magirazi ezuva ari polarkusimuka.
Chii chinonzi UV 400 chengetedzo?
Kudzivirirwa mumagirazi ezuva UV400 Iyo firita inokudzivirira zvakakwana kubva kumwaranzi yezuva yeUV, kusanganisira UVA uye UVB mwaranzi. Izvi zvinoreva kuti maalensi egirazi rako remagirazi anokwanisa kuvhara chero mwaranzi yeUV ine wavelength isingasviki mazana mana nanometer.
Kuchenesa sei magirazi ezuva polarkusimuka?
Kazhinji nzira inoshanda kwazvo yekuchenesa magirazi ezuva ndeyekushandisa sipo yakapfava nemvura. Nekudaro, isu takagadzira diki dhairekitori ekuchenesa magirazi ezuva polarized mune ino chinyorwa kubva ku blog yedu. Dzvanya apa: machenesa magirazi polarkusimuka
Kudzivirira kukwenya uye kuchengetedza magirazi ako ezuva kwakakosha kuti uone kuti anogara nekufamba kwenguva mune akakwana mamiriro. Magirazi anototambura zvisingaite nemashandisirwo atinovapa nekufamba kwenguva kuti vasavadzivirire nepatinogona napo. Tinokupa iwe matipi akareruka ekuti utarise zvirinani magirazi ako ezuva:
Paunenge usiri kuzvishandisa, ndapota zvichengete zvakanaka:
Gara uchidzivirira magirazi ako kubva pakuunganidzwa kweguruva, kukwenya, kukwenya uye chero chiitiko chiri mukati menyaya yavo. Kune zvinogara zvine njodzi uye tsaona saka izvi zvichave nemhedzisiro uye isu tine magirazi akachengetedzwa zvakanaka. Paunenge uchibvisa magirazi kubva kwavari, shandisa maoko maviri kudzivirira kudhonza izvo zvinogona kukonzera tembere uye furemu kutambura.
Chenesa magirazi ako kazhinji:
Kuti uzvichenese zvepamusoro, gara uchishandisa magirazi-ekuchenesa jira uye kazhinji, zvigeze zvakakwana nemvura inodziya uye nesipo nyoro. Kugara kwakanaka kwekuchenesa kunobatsira iwe kudzivirira lenzi uye furemu kubatsira kuwedzera hupenyu hwavo hunobatsira mumamiriro akakwana.
Dzivisa kushandisa zvigadzirwa zvinogona kukuvadza mafuremu uye lenzi:
Kuti uchengetedze magirazi ako ezuva zvakanaka, dzivisa kushandisa zvigadzirwa zvakaita semafuta, mafuta ezuva, mushonga wevhudzi kana zvigadzirwa zvinogumbura. Kana iwe uchizora kirimu kana cologne, edza kubvisa magirazi ako usati waashandisa uye nekudaro kuti chikamu icho chezvigadzirwa izvi chingauye pamalenzi kana mafuremu. Zvakare, usaise pachena magirazi ako kunzvimbo dzinodziya kana nzvimbo dzine tembiricha yakakwira. Kunyangwe iwo ari magirazi ezuva, usaasiye iwo akarara chero kupi muzuva rinopisa rezhizha! Iyo tembiricha yakakwira iyo inosvika neyakaenderera kuratidzwa, inoshatisa izvo zvinhu.
Tevedza aya matipi matatu uye iwe uchaona kuti magirazi ako ezuva anozogara kwenguva yakareba sei.
Kubva pane 12 maonero Nyora zvaunofunga
Freeride Wood / Bhuruu
Freeride Wood / Bhuruu 44.95 €
Polar Wood / Bhuruu
Polar Wood / Bhuruu 44.95 €
Freeride Nhema / Bhuruu
Freeride Nhema / Bhuruu 44.95 €
Freeride Nhema / Tsvuku
Freeride Nhema / Tsvuku 44.95 €
Polar Black / Black 44.95 €
Free Spirit Wood / Bhuruu
Free Spirit Wood / Bhuruu 44.95 €
Freeride Green / Nhema
Freeride Green / Nhema 44.95 €